दिनदिनै फलफुलकाे जुस पिउनु स्वास्थ्यका लागी हानीकारक - ज्ञानविज्ञान
तौल नियन्त्रणका लागि जुस मात्र पिउँदा के हुन्छ ?
ताजा जुसको सेवन स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । जुसले पाचन यन्त्रलाई सहज बनाउने मात्र होइन, पोषण पनि दिन्छ । फल, सब्जी आदिको जुस बनाइन्छ । बजारमा उपलब्ध प्याकेटको जुस भने त्यती लाभदायक नहुने बताइन्छ । संभव भएसम्म ताजा फलफूलको जुस सेवन गर्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा त गर्छ र तर यसका लागि केही सावधानी भने अपनाउनुपर्छ ।
– सुरुमा गहुँको जमराको रस थोरै पिउने, क्रमस मात्रा बढाउँदै लाने ।
Don't Miss it फलभन्दा बढी फाइदाजनक छ अम्बाकाे पात, जान्नुहाेस्
Up Next किन साउनमा हरियाे चुरा लगाइन्छ ? यस्ताे छ यसकाे महत्व, जान्नुहाेस्